''ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ နဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တစ်ကားက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်မသိပေမယ့် အရမ်း?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုံတင်ပြသဖို့ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေရချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာဝင်ရောက်ပြသခဲ့ပြီး ဆုအချို့ရရှိခဲ့တဲ့၊ ရိုက်ကူးစဉ်မှာလည်း အခက်အခဲပေါင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့ ”မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို မတ် ၁၆ ရက်မှစတင်ပြီး ရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာခရစ်(စ်)တီးနားခီကို အခုလို တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး – ”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ”ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးကို အချိန်အကြာကြီးစောင့်ပြီးတော့မှ အခုလိုရုံတင် ပြသခွင့်ရပြီဆိုတော့ ဘာများပြောချင်တာမျိုးရှိလဲ။
ဖြေ- ကျွန်မကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရုံတင်ပြသပေးတဲ့ Junction ရုပ်ရှင် ရုံတွေနဲ့ ရုံရှင်တော်တော်များများကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ တချို့ရုံရှင်တွေကို ကျွန်မမပြောနိုင်သေးတာကတော့ အခုချိန်ထိ ရုံတင်ပြသရမယ့်ရုံစာရင်း အခုထိမထွက်သေးလို့ပါ။ ”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ကျွန် မအရမ်းကို ရုံတင်ချင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှာ ကျွန်မရုပ်ရှင်ကို စပြီးတော့ရေးပါတယ်။၂ဝ၁၃ ခု နှစ်မှာ ရုပ်ရှင်ကို ကျွန်မကိုယုံယုံ ကြည်ကြည်အပ်တဲ့ ဦးရဲမင်း (Mona Strassburger ) ကို ကျွန်မအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မက အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ကို အခုလိုယုံယုံကြည်ကြည် အလုပ်အပ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုံတင်ပြသဖို့အတွက် တန်းစီနေတဲ့ အချိန်သုံးနှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံတင်ပြသတဲ့စနစ်က တန်းစီစနစ်က ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက် အခုရုံတင်ဖို့ကိုလည်း လေးနှစ်ကျော် စောင့်ရပါတယ်။
မေး- ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စတင် ရိုက်ကူးဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးတော့ အခုလို ”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ဖို့အတွက်ကို ငါးနှစ်ကျော်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မကို အလုပ်တွေအများကြီး လာကမ်းလှမ်းကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမရိုက်ချင်လို့ ငြင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ငြင်းခဲ့တာလဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ရုပ်ရှင်မှာ Pre Production နဲ့ Post Production ကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းက မသွားဘူးဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား ကောင်းဖို့ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား မကောင်းဘူးဆိုရင် အဓိကပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့်သူက ကျွန်မတို့ ဒါရိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲ ရိုက်ခဲ့ရ ရိုက်ခဲ့ရ ပရိသတ်က မသိပါဘူး။ ဒါ ကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကို မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်း ကြောင်းကနေ ရိုက်ချင်တဲ့အတွက် ကြောင့် ငါးနှစ်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။
မေး- ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာ ဘတ်ဂျက်က အရမ်းနည်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းနဲ့ ရိုက်ကူးဖို့ကို ဘာဖြစ်လို့ လက်ခံဖြစ် တာလဲ။
ဖြေ – ”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးဖို့အတွက် ဇာတ်ညွှန်းရေး ပြီးတော့ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဒီလိုအချိန်မှာ စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်ကူးချိန် နှစ်လကျော် သုံးလကြာတဲ့အချိန်မှာ ဘတ်ဂျက်ကုန်သွားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးဖို့ စကမ်းလှမ်းခံရတဲ့အချိန်က ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ နဲ့စရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခံရပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်မသိပါတယ်။ သိသိကြီးနဲ့ ကျွန်မ ဒီအလုပ်ကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် လက်ခံတာလဲဆိုတော့ အရမ်းကိုရိုက်ပြချင်လွန်းလို့ လက်ခံလိုက်တာပါ။
မေး- ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ရတာဆိုတော့ အခက်အခဲ တွေရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- အဲဒီလိုမျိုး လက်ခံလိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်မတို့အဖွဲ့က အများကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ ဒီမြန်မာပြည်ဟာ အရမ်း ဈေးကြီးတယ်။ ပုဂံတို့ဘာတို့ဆိုရင် အရမ်းဈေးကြီးတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ ရိုက်ကူးရေး စရိတ်ကကုန်ကျစရိတ်အရမ်းကိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဘတ်ဂျက်က ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ ဖြစ်သွားပြီဆိုကတည်းက ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မအဖွဲ့ဝင် တွေအားလုံးက မြို့တွေကိုသွားပြီးတော့ စပွန်ဆာ တောင်းပါတယ်။ အဲဒီလိုတောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ မင်းသား ရော၊ မင်းသမီးရော နာမည်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့က ဘတ်ဂျက်မရှိပေမယ့်လည်း ကွာလတီ ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်စိုက် ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်စိုက် ပြီးတော့ ကောင်းချင်လို့ လုပ်ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးကဆိုရင် ထိုက်သင့်တဲ့အနုပညာကြေးကိုမရခဲ့ကြပါဘူး။ တချို့ သောအဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင် ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွေမှာ တည်းခိုခဲ့ရတာ တွေရှိတဲ့အတွက် ကျွန်မအရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်လေးကို ပရိသတ်ကကြိုက်တယ်၊ အားပေးမှုရတယ်ဆိုရင် ကျွန်မသူတို့အတွက် တစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းစဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်သည် ဖြစ်စေ၊ မအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်မကို ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေး- ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေရင်းနဲ့ ရပ်နားလိုက်ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ဒီရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးနေရင်းနဲ့ သုံးလတိတိရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘတ်ဂျက်ကလည်း အရမ်းနည်းတဲ့အတွက် ရိုက်ကူးလို့မရတော့လို့ ရပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ MUDRAS CALLING Promo ကို အွန်လိုင်းမှာ တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပရိသတ်ကအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက် ကျွန်မဘတ်ဂျက်ထပ်ရှာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ ဇာတ်ကားကို ဆက်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မေး- နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော် တွေမှာလည်း သွားရောက်ယှဉ် ပြိုင်ခဲ့သေးတယ်နော်။
ဖြေ- ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုံတင်ဖို့စောင့် နေတဲ့ကာလမှာ ကျွန်မတို့ဘာဆက် လုပ်ရမလဲ မသိတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာက ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုးခုမှာ ပါဝင် ပြသခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဆုနှစ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
JYP အင်တာတိန်းမန့်မှ စင်တင်မယ့် Stray Kids အဖွဲ့ ယခုလအတွင်း ပွဲထွက်မယ်
ကျောင်းစာမေးပွဲ အချို့ ပြီးစီးမှုနှင့် သင်္ကြန်ကာလ နီးကပ်လာမှုကြောင့် အေးနေသည့် စစ်ကိုင်း ဂီတ?
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအား စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါက
စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ပြည်ပပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက?